Igama elithi "umthwalo emphakathini" yavela olimini lwethu ngesikhathi esifanayo ngegama elithi "Ukuze ukuhwebelana kwembulunga yonke". Futhi akwenzekanga ngephutha. Uma bayazindla ukubaluleka mazwi, igama lokuqala siwumphumela umgomo ezivela yesibili. Corporation - inhlangano ngabanye, ukusebenza ngokuzimela. Leli gama libhekisela inkampani enkulu nge eziningi amagatsha kwelinye izwe noma emhlabeni jikelele. ifektri ikhandlela uBaba Fyodor corporation ngeke ngokuthi.
Ukuhwebelana Kwembulunga Yonke - inqubo ukusebenzisa bezinhlangano. Uma uyikhohlwa, yini umthwalo emphakathini emphakathini ngoba ukusetshenziswa kwezinsiza, iplanethi maduze ukuphila kuwo. Lo mqondo kuhilela ukwamukelwa yokuzithandela yokuzibophezela eyengeziwe edingekayo ngaphezu komthetho. Isimo, umphakathi kanye bangabasebenzi zabo.
I ibhizinisi kumele akufanele sedlule imingcele kuvunyelwe of emkhathini, kodwa ngaphezu ukuthi uchitha imali wokubuyiselwa nemvelo. Kufanele iholo abasebenzi, kodwa inike izimali ezongeziwe nokuvuselelwa ochwepheshe. Ingqikithi yalo umqondo siyohlala njalo ezingqondweni imiyalo kweBhayibheli: uma emandleni aphakeme wakhethwa umuntu kwezomnotho namandla, lokhu kwenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi ushintshe izwe libe yindawo engcono, ukuze sisize ababuthaka. Ngaphezu kwalokho, umuntu akakwazi ukufinyelela amabutho ukuba bangayeki ingxenye inzuzo yayo emphakathini.
Ngisho noma okungalindelekile yokuzithandela, ngenxa imfuneko kwesikhathi, ngeke kodwa jabulani. Bheka "nesibopho emphakathini kwenkampani" belingana nto "inkampani umsebenzi" elikhona izincwajana kwanoma iyiphi inkampani enkulu. Ngaphandle okuhlala ezinjalo eziyisisekelo ibhizinisi lesimanje kuyoba zasendle kanye nokweqisa.
Kungaba okungalungile kufakazela ukuthi nesibopho emphakathini kwenkampani - akubona izinhlangano ezinkulu kuphela. Noma yimuphi ibhizinisi lokwenza inzuzo, umthwalo womphakathi ukuze enze umsebenzi wawo. Vele lesibopho nhlobo ezahlukene. Kuyinto ngokungafanele ukuba zitshele kusuka asanda kusungulwa inkampani encane, amanye amaphrojekthi global. Kodwa iholo, izintela, ukuhambisana nezidingo zokuphepha kumele.
Le nkampani iye yanda, kwashesha, wandisa - umthwalo emphakathini uye wathuthela ezingeni lesibili. Kwakuwusuku ithuba ukuze anakekele labo ziye zaba nomthelela ukunwetshwa ibhizinisi - umsebenzi. Sidinga ukudala izimo ezikahle hhayi kuphela umsebenzi kodwa futhi ukuzijabulisa, abuyisele bangabasebenzi egcwele ukuqeqeshwa, ukuqinisekisa kwezimo ezivamile eziphilayo (uma inkampani unesithakazelo kulondolozwe i kwabasebenzi abaqeqeshiwe abanolwazi).
Uma inkampani liye leqa ukubaluleka endawo umthwalo emphakathini kufika ezingeni lesithathu. Kulesi sigaba imisebenzi yenkampani yesihle kulindeleke noma isiqondiso, wusizo emphakathini. Ngesikhathi lapho isintu ifikile yaya embundwini Ukuqhubeka kwalezi zilwane zikhona, izimiso CSR - akuyona nje ukukhathazeka emphakathini, kodwa ekugcineni ngabo nabathandekayo babo.
Scene "imikhonzo baba yaga." Comic iskripthi lokuzalwa